स्मृति जोगाउने उपाय | Nepal Hypnosis Clinic and Training
स्मृति जोगाउने उपाय
के-के कारण हुन् त विस्मृतिकाः
तपाईंको प्रवृत्ति कस्तो छ ? तपाईंको व्यक्तित्व कस्तो छ ? तपाईंले के-कस्ता कुराहरू सम्झिनु हुन्छ र के-कस्ता कुराहरू बिर्सनुहुन्छ ? तपाईंलाई के काम गर्न इच्छा लाग्छ ? कस्तो किसिमको काम गर्नुहुन्छ ? आफ्नो काममा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न ? तपाईंको कार्यमा परिवारजन र मित्रहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु हुन्छ ? यस्ता सबै कुराहरूमा एकपटक विचार गर्नुहोस् । शान्त ठाउँमा बसेर आफूबारे सोच्नुहोस् । तपाईं दिनमा कति घण्टा सुत्नुहुन्छ ? निद्रा कस्तो छ ? दैनिक कसरत या मनोरञ्जन कति मात्रामा गर्नुहुन्छ ? तपाईंको शारीरिक अवस्था कस्तो छ ? घर-परिवारको अन्य सदस्यसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ? साथीभाईसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ?यस्ता सबै साना-साना कुराहरू ध्यान पुर्‍याउनुहोस् । सानातिना कुराहरूको सन्तुलन मिलेर नै जीवनको अर्थ बन्छ । यिनीहरूलाई सन्तुलित राख्नसक्नु नै आन्तरिक क्षमता हो । तपाईंको आन्तरिक क्षमता कति छ ? यस बारे पनि सचेत रहुनुहोस् । सबैभन्दा पहिले तपाईं आफूलाई माया गर्नुहोस् । आफ्नो स्वास्थ्य, रुचि चाहना र क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुहोस् ।
यी सबै कुरामा ध्यान दिनु भएपछि सायद समाधान आफैं पाउनुहुन्छ या भनौं समस्या त केवल यिनीहरूको अव्यवस्थाका कारण देखिएको हो । यस्ता सानासाना कुराहरू अव्यवस्थित भई जेलिएका कारण तपाईंको स्मरणशक्ति न्यून हुँदै गएको हुनसक्छ । एकपटक यस्ता कुरामा ध्यान दिएर सोच्नुहोस् । सम्झना शक्ति घट्नुको कारण थाहा हुने बित्तिकै समस्या समाधानको उपाय भेटिनेछ ।
तपाईंको बिर्सिने समस्याले तपाईंमा के-कस्ता असरहरू परेका छन् भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुहोस् । आफूलाई चाहिने कुरा सम्झेर अनावश्यक कुराहरू बिर्सिनुभएको हो कि ?
सम्झनै नचाहेर या सम्झनुपर्ने नठानेर ध्यान नदिएका कारण बिर्सिनु भएको हो ? वास्ता नगरेर पो बिर्सिनु भएको हो कि ! अनि कुनै कुरा सम्झिदा आफूलाई दुःख लाग्ने भएका कारण यो आफैँभित्र दबाएर बिर्सिन खोज्नु भएको हो भन्ने बारेमा सचेत हुनुहोस् । या दैनिक कामको चापका कारण तपाईंमा तनाव भएको हो कि ?
अनि तपाईंमा बिर्सिने क्रम कहिलेदेखि सुरु भएको हो ? बिर्सिने क्रमको घट्दो या बढ्दो अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि सचेत हुनुहोस् । तपाईंले यसअघि यो समस्यालाई कसरी लिनुहुन्थ्यो, यसको समाधानका लागि के-के गर्नुभयो ? यो समस्याले कस्तो असर गर्दै छ ? भन्ने कुराहरू पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
'म जे कुरा पनि बिर्सिन्छु, भनेर तपाईंले बारम्बार भनिरहनु भयो या सोचिरहनु भयो भने पनि तपाईंको अवचेतन मस्तिष्कमा असर पुग्छ र तपाईंमा साँच्चिकै बिर्सिने बानीको मात्रा बढ्न सक्छ । त्यसकारण सकारात्मक ढंगले आफ्ना समस्यालाई प्रस्तुत गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस् । जस्तैः 'मेरो स्मरण शक्तिमा कमी आएको छ ।' 'म अलि कम सम्झिन्छु ।' यस्तै किसिमले सकारात्मक रूपमा बोल्ने या सोच्ने क्रमको वृद्धि गर्नुहोस् ।
सकारात्मक सोचाइ, आफ्नो क्षमता र प्रकृतिको पहिचान र स्वीकार आफ्नो व्यक्तित्वको प्रकार, आफू र समाजबीच वातावरणको समायोजन, सन्तुलन र समयानुसार कार्य, आफ्ना रुचि-चाहनाको कदर, नियमितताजस्ता कुरामा विचार पुर्‍याएर कार्य गर्नाले मानिसमा आफूप्रति सन्तुष्ट भाव जागृत् हुने हुँदा स्मरण शक्तिको समेत विकास हुन्छ ।
एकपटक आत्मअनुशासित भएर आफूलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ बनाउनका लागि परिश्रम गर्नुहोस् । एक स्वस्थ मानिस हुन आवश्यक सम्पूर्ण कुरामा विचार गरेर कार्यान्वयन गर्नुहोस् । आफूप्रति सकारात्मक धारणा राख्नुहोस् । आफूलाई माया गर्नुहोस् । आफ्नो दैनिकीलाई समयअनुसार पालना गर्नुहोस् र आफूलाई सुखी राख्नुहोस् । तपाई सुखी हुँदा प्राकृतिक रूपमा तपाईंको स्मरण शक्ति बढ्छ ।
यदि, यति गर्दा पनि तपाईंको समस्या कम भएन र आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमै असर परिरहेको खण्डमा तपाईंले मनोविमर्शकर्तासँग सम्पर्क राख्नुपर्छ । मनोविमर्शले तपाईंको समस्याको समाधान तपाईंभित्रबाटै खोजेर भेट्ने कार्य गर्ने हुँदा यो नै तपाईंका लागि उत्कृष्ट प्रक्रिया हो ।
06/20/2011 - 00:21